တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: ချစ်တယ် I hate you (၂၅)
အမေးမရှိသော နှလုံးသားကဗျာ အပိုင်းအစ တစ်ခု
နယူးတန်ရဲ့ နိယာမတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်...။
စကြာဝဠာအတွင်း ချစ်ခြင်းနိယာမကို ပယ်ချ
နှလုံးသားစကြာဝဠာနဲ့ တုန်ခါနေတဲ့ ရေဒီယိုဓာတ်လှိုင်းတွေ
သမိုင်းထဲ အာဒန် ဧဝတို့ စားသုံးလိုက်တာ
အချစ်လို့ဆိုရင် ပထဆုံး ပန်းသီးတစ်ကိုက်ကို အချစ်
ဒုတိယ ပန်းသီးတစ်ကိုက်ကို မေတ္တာ
တတိယ ပန်းသီးတစ်ကိုက်ကို သစ္စာ
စတုတ္ထ ပန်းသီး တစ်ကိုက်ကို အသစ်မရှာတဲ့
I hate you......လို့ပြောချင်တယ်...
H........=Happy to fall in love with you forever.
A........=Agree with your love but never hate you.
T........=Talk to you what I ever love to you.
E........=Every moment, I miss you everlasting.
ဒါတွေဟာ သဘာဝတရားတွေရဲ့ စီးဆင်းလာတဲ့
ပုံမှားမရိုက်တက်ဘူး အမှန်တရားကို တွယ်ဖက်ပြီး မြတ်နိုးတက်တယ်
အချစ်သမိုင်းပညာရှင် မဟုတ်ဘူး အကျင့်တရားအမှန်နဲ့ ချစ်တက်တယ်
သမိုင်းမလိမ်တက်ဘူး လမင်းကြီးလို ချစ်တက်တယ်
ရာထူးမခင်တွယ်တက်ဘူး အရိုးသားဆုံး ချစ်တက်တယ်
အခုတော့....ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတိုင်း
သဘာဝတရားရဲ့ နိယာမအောက်မှာ ချစ်တယ်.....I hate you..။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:07 AM